HomeWararka CiyaarahaPreston North End 0-2 Liverpool, Reds oo soo baxday iyo Manchester City oo laga reebay Carabao cup
October 28, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada 0
Kooxda Liverpool oo booqasho ugu tagay kooxda Preston North End ayaa kasoo gaartay guul muhiim ah kulan ka tirsan koobka EFL Cup.
Reds ayaa ku badisay labo gool oo ay ka heshay xidigaha kala ah Divock Origi iyo Takumi Minamino.
Labada Kooxood ayaa ku kala nastay qeybta hore Goolal la’an iyadoo Reds ay lumisay dhoor kubadood.
Qeybta labaad Liverpool ayaa sameesay isbadal xoogan oo u suura galisay inay hesho goolkeeda 1aad ee ciyaarta waxana u saxiixay Takumi Minamino oo caawin ka helay Neco Williams isagoo dhameestiray kubad banaanka loo soo dhigay.
Divock Origi ayaana goolka labaad ku daray Daqiiqadii 84aad isagoo dhaliyay kubad Cirib ah guud ahaan kulanka ayaa ku soo dhamaaday 0-2.
Liverpool ayaa hada iska xaadirisay wareega 16aad ee koobka EFL Cup.
Dhanka kale kooxda Manchester City ayaa guud ahaan koobka iskaga hartay kadib markii looga badiyay Rigoorayaal ciyaar markii hore ku soo dhamaaday 0-0.
si lamid ah Leicester City oo lagu qabtay bar-baro 2-2 kulankeeda Brighton ayaa ku soo baxday 4-2 rigoore ama gool ku laad.